ရှူခင်းလေးများပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရှူခင်းလေးများပုံ
Posted by koaung on Oct 14, 2011 in Photography, Travel | 21 comments
အားကျပြီးရင် အားကျ မိတယ် ကိုချို ရေ
“ကမ္ဘာပတ်လည် ချိုရိုက်မယ်” လို ့ခေါင်းစဉ်တပ်ပါဗျို ့
ဒါ တရုတ်ပြည် မှာ မှတ်တယ်
ထိုင်ဝမ်၊ထိုင်ပေမြို၊ချန်ကေရှိက်အမှတ်တရ အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး ကဗာ႓လှည့် ခရီးတွားများ လည်ပတ်တဲ့နေရာဖြစ်ကြောင်း
ခံစားပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ အစဉ်လေးစားလျှက်
ရွာထဲက ကမ္ဘာ…မြန်မာ..ပတ်ပြီး တင်ပေးတဲ့ ဆြာတွေ…ရဲ့..လက်ရာ..ခံစားရတာ..
မန်းတလေးကိုချစ်တလို ဆင်၆ကောင်ဖိနပ် ကိုလဲတတိရတယ် ယောလုံချီနဲ့ မန်းတလေးထိုးမုန့် ကိုလည်း မမေပါ
အော …တကယ်လား…ကို ချိုတို့….နောက်တခါ မန္တလေးရောက် ရင်…..ဗထူးကွင်း က
မန္တလေး မြီးရှည် နဲ့ဧည် ့ခံရမယ်။ ဆွေမျိ ုးတွေ တခါတည်းမေ ့သွားဦးမယ်ဗျို ့။
မန္တလေးရဲ ့ကျုုံ ုး နဲ ့မြိ ု.ရိုး တောင်ပေါ်ရှ ုခင်းတွေက ဓာတ်ပုံဆရာ ကို ထမင်းမေ့သွားနိူင်လောက်တယ်။
အခု ထိုင်ဝမ်၊ထိုင်ပေ ပုံတွေလောက်တော ့မခမ်းနားပေမယ် ့
မန္တလေးရွေနန်းတော်ကြီး ကတော့ ရှေးမူမပျက် တင် ့တယ်အံ ့မခန်းပါဘဲဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော ့(၃)ပုံမြောက်ပုံလေးကို အကြိ ုက်ဆုံးဘဲဗျာ။
အဲဒီနေရာ က ဘာအဆောက်အဦ လဲဗျာ။ သိပါရစေ ကိုချို ုေ၇။
တွားလေသူ ကူမင်တန်ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးချန်ကေရှိတ် အမှတ်တရ(မမေ့နိုင်တော)အဆောက်အဦး ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာလိုအလွယ်တကူပြောရရင် အာဇာနည်ဘိတ်မန်၊အာဇာနည်ပြတိုက် ဖြစ်ပါတယ်
နံပတ်၃ပုံကတော့ အဲဒီဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦး(ဟောခန်းမ)တခုပါ ပွဲလန်းတဘင်ရှိတဲ့အခါ အတုံးပြူပါတယ် (ဘားဂလစ် use ရတာမို့ဖောနက်တစ်မှားတာ ဆောရီးပါ)
ငယ်စဉ်က မန်းတလေး မြို့ပေါ်မှာလဲတဲဘူးတလို နန်းတွင်းမှာပါ တလလောက်နေဘူး လို့ မန်းတလေး စစ်ကိုင်း မုံရွာ ပုဂံ ပုပါး္ပ
ကိုချိုရဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး အထက်တန်းတုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို သွားသတိရမိပါတော့တယ်……….
(စာသားတွေ မှန်မမှန်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။)
သင်းပျံ့ခဲ့သူ့ခြံမှာ . . .
ကြည်စရာ နီဝါတွေလည်း မပွင့်လေတော့
အားပျက်စရာ . . .
ရွှင်ချင်ပါ့ စိတ်ထဲ . . .
ပေါင်းနုတ်ဖို့ခဲ . . .
Thank you Kai, I’m looking for that poem without giving much effort. Now I owe you.
When you happen to come to Shwe Mandalay,ameal on me.
ဆရာခိုင်၏ ရွှေဉဏ်တော်အားဦးညွတ်မိပါ၏(ဖားတာ) ကျနော်လာမေးရင် ကို့နာမယ်တောင် ကိုယ် မေချင်တလိုလို ဖြစ်နေပါသည် ((( နောက်တာဗျိုး)))စုံစုံရေ နေရာတိုင်းဟာ အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲလို့နေပါတယ် ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် ကောင်းတာရှိတလို ဆိုးတာလဲ ရှိတာတဘာဝပါ ကျနော်ပြောချင်တာက အဓိကက လူပါဘဲ (သန်ရှင်းတာလေးမြင်ရင် လူတိုင်းကိုယ်နေတဲ့ အိမ်၊တိုင်းပြည်။။သန်ချင်ကြတာပါဘဲ)ဒါကြောင် ဖိုတိုလေးမြင်ပြီး ပြင်တင်တာပြင်ပြီး လုဎ်သင့်တာလုဎ်ကြစို့ (ဒီဆန်ဒလေးပါ)
ဦးချိုကြီး ပိုစ့်ထဲမှာ နေရာနဲ့ အရပ်ဒေသ ဘယ်လိုသွားရင် ဘယ်လိုဆိုတာတွေရယ်၊ နောက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ ဘယ်နေရာတွေ အသွားများတာရယ် သွားရင် ကုန်ကျစရိတ်ဝင်ကြေးရှိ မရှိဆိုတာတွေကိုလည်း ဖြည့်စွက်မှတ်တမ်းလေး လုပ်ပေးပါဦးနော်။ဒါမှ မနောတို့လည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရောက်ရှိသွားသကဲ့သို့ ပိုမိုခံစားမိမှာပါ။
မမလေး မနောခင်ဗျား ဒီနေရာကမန်းနီးပေးဖို မလိုပါ လူတိုင်းဖရီး ဝင်လို့ရပါ၏ နောက်ထပ်အခြားနေရာဒေတများ အလျှင်းတင့်တလို တင်ပြပေးပါမည် ဟုက်ကဲ့ဗျာနောက်တခါ post တင်ရင် ဒီထက်ပြည်စုံအောင် ကြိုးစားပါ့မယ် (လေးစားလျှက်)
thanks for your poet lion king
ကျေးဇူး ကိုချိုရေ။ ပန်းလေးတွေတုန်းက လှသလို ရှုခင်းတွေကလည်းရှုမငြီးပါပဲ။ ထိုင်ဝမ် ထိုင်ပေ မပြောရင်
ကြည့်ခါစက တရုပ်ပြည်လို့ ထင်မိတာ။ By the way, are you Chinese? Please do not get mad at me,
I just notice that you typed all (သ) sounds in the form of (တ) sounds. My Chinese students
answer my questions ( မတိဘူးတီချယ် ) instead of (မသိဘူးတီချယ်)။
Please,please, please don’t be upset for my question, considering that I’m your fan.
ဆရာမရေ ဘားဂလစ် မှာမြန်မာ ဖော်နက်တစ် မှာtက တူးကလစ်လေ မချိန်းတတ်ဘူးဖြစ်နေလို့( tell me if you know how to change) စာရိုက်တိုင်း ဖော်နက်တစ်မှားနေတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမ ကျနော်က၄ပုံ၃ပုံ chinese ပါ လေးစားလျှက်